ချစ်ကြည်အေး: ပြည့်စုံခြင်း မပြည့်စုံခြင်း
"ဒီတစ်နှစ်ရော ကျပြန်ပြီလား၊ တော်ပြီ နင့်ကို ဒီနှစ်တော့ စာသင်ဝိုင်းက ထုတ်တော့မယ်"
"အမေ့သမီးက အလှအပပဲ မက်နေတာကိုး အမေရဲ့၊ ထုတ်ပစ်လိုက် အမေ။ သူ့အတွက်ကုန်မဲ့ပိုက်ဆံ သားကို ဂစ်တာ ဝယ်ပေး နော် အမေ"
"အောင်မာ ကိုကိုနော်၊ နင့်လိုရည်းစားတွေ ပွနေတယ်များ မှတ်လား၊ ညီမလေးက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လှချင်တာသက်သက်ပဲ"
"တော်ကြစမ်း နင်တို့ နှစ်ကောင်လုံး၊ ခဏနေ နင်တို့အဖေလာမှ နင်တို့အဖေနဲ့ တိုင်မယ်။ နင်တို့က အဖေပဲ အသက်ရှိတယ် ထင်ကြတာ"
"ဟဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ လူသံကြားတယ် သွားကြည့်စမ်း"
"အမေ အမေခေါ်ထားတာဆို၊ မီးပူတိုက်ဖို့ တဲ့"
"အော် အေး အေး၊ ဟုတ်သားပဲ...။ လာ လာ ညီမ။ ခဏလေး နားပါဦး၊ ရေလေးဘာလေး သောက်၊ ပြီးမှ မီးပူတိုက်တာပေါ့"
"ရတယ် အစ်မ၊ မနားတော့ပါဘူး။ တိုက်စရာရှိတာတွေသာ ပေးပါ၊ ကျွန်မ အိမ်အစောပြန်ချင်လို့"
"ဟုတ်လား အေး အေး၊ ဒါဆိုလည်း တိုက်လေ"
"အစ်မပဲ ကြည့်ပေးပါ အစ်မရယ်"
"ရော့ ဒါဆိုလည်း နှစ်ထောင်ယူလိုက် နော်၊ နည်းသလား၊ တိုက်ရတဲ့ အဝတ်တွေနဲ့စာရင် အစ်မပေးတာ နည်းများနေသလား"
"ရပါတယ် အစ်မ၊ မနည်းပါဘူး။ ကျွန်မယောကျာ်း တစ်နေ့လုံး ဆိုက်ကားနင်းတာ အုံနာခ တစ်ထောင်ပေးပြီးရင် ကိုယ့်အတွက် နှစ်ထောင်လောက် ကျန်တာ။ ကျွန်မက ခု နေ့ဝက်တောင်မရှိသေးဘူး၊ မီးပူတိုက်ခ နှစ်ထောင်ရတာလေ အစ်မရဲ့"
"ဟင် လောက်သလား၊ ညီမယောကျာ်းရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ညီမရတဲ့ပိုက်ဆံပေါင်းရင်တောင် တစ်နေ့လေးထောင်ပဲ ရှိတဲ့ဟာ...."
"ဘယ်လောက်ပါ့မလဲ အစ်မရယ်။ ဒါတောင် ယောကျာ်းက ကျွန်မကို လုပ်စေချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မမှ မလုပ်ရင်လည်း ကျွန်မကလေးတွေ ငတ်ရုံရှိတာအစ်မရယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုပဲ ကျဘမ်းအလုပ်လေးတွေ သူများအိမ်တွေမှာ လုပ်ရတော့တာပေါ့။ ပေါင်နှံချေးငှားသင့်ရင်လည်း ချေးငှားရတာပေါ့"
"ဟင့်အင်း မစားတော့ပါဘူး အစ်မရယ်"
"ကဲပါ ဒါဆိုလည်း ညီမကလေးတွေစားဖို့ ယူသွား"
"ယူမသွားတော့ဘူး အစ်မ။ ကျွန်မသမီးလေး ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူး လေးဘာသာနဲ့ အောင်တယ် အစ်မရဲ့၊ အဲဒါ သူ့အဖေက စောစောပြန်လာခဲ့ဖို့ မှာတယ်။ အပြန်ကို ခေါက်ဆွဲကြော်ဝယ်ခဲ့မယ်တဲ့၊ မိသားစု ထမင်းလက်စုံ စားကြရအောင်လို့လေ။ ပြန်တော့မယ် နော် အစ်မ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း အဝတ်လျှော်စရာ၊ မီးပူတိုက်စရာ ရှိရင် ခေါ်နော် အစ်မ"
အမ်တီအန် Fri Sep 20, 11:35:00 AM GMT+8
ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ အစစ်အမှန်က ဘာလဲဆိုတာရယ်....
ဘ၀အသိရှိသူမှာ တန်ဘိုးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာသိနေတာရယ်ကို ပါးပါးလေးပြထားတာ သဘောကျတယ်အစ်မရေ...
သိ င်ျဂါ ရ Fri Sep 20, 02:32:00 PM GMT+8
ဘယ် အခြေအနေ ပဲ ဖြစ်နေပါစေ ... ကိုယ် ယုံကြည်ရာ ထားသလို ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနိူင်ဖို့ ...
Computer Fri Sep 20, 03:19:00 PM GMT+8
This particular style was well know in magazines as 'one page story'. I would like to see that you rather stick with your vibe. This style clearly give straight message but it is formulaic and has been done to death so it stagnates.
ရွှေယွန်းဝါ Fri Sep 20, 07:56:00 PM GMT+8
တိုတိုလေးနဲ့တင် နောက်ဆုံးမှာ ခံစားသွားရတယ်။
ရင်လှိုင်းခတ်သံ Sat Sep 21, 07:14:00 AM GMT+8
ပြည့်စုံခြင်းတွေ မြင်ရတယ်။ တစ်ကယ်က ခံယူတဲ့သူအပေါ်မှာ သာ ပြည့်စုံခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်း ကွားခြားသွားတာပေ့ါနော်....။
San San Htun Sat Sep 21, 07:52:00 AM GMT+8
တိုတိုလေးပေမဲ့ပေးတဲ့ Message လေးက ကောင်းလိုက်တာ...